Ny lesoka amin'ny Windows 8 dia mamela ny OS OS. Avy amin'ny Linux
Ny vaovao Rafitra miasa Windows 8 Amidy amin'ny fomba ofisialy izao ary tsy niandry ela ny hackers hampiasa azy io fa tsy handoa izany.
Volana vitsivitsy lasa izay ny Beta kinova an'ny Windows 8 alaina, fa mba hahazoana ny kinova ofisialy dia mila mandoa vola ianao hahazoana ny kaody fampidirana. Ny marina dia lesoka amin'ny Windows na mamela "manome" hametraka izany amin'ny fomba rafitra fandidiana ary avy eo manazava ny antony:
Microsoft dia namoaka fanavaozam-baovao Windows Media Center izay (rehefa tafapetraka) dia tsy manamarina raha ny lakile ampiasaina dia eo am-pelatanana, amin'ny fisoratana anarana ara-dalàna ny kopia ary mamela ny vokatra Windows 8 dia voasoratra anarana amin'ny lakile (na ampiasaina io na tsia).
Mba hazava kokoa, ny teknika ampiasain'ny hackers nefa tsy mampiasa ny teknolojia mankasitraka dia ny misintona iray kopian'ny Windows 8 Pro, soraty ao anatin'ny tenimiafinao izay efa nampiasaina ary manavao ny Windows Media Center fa tsy mila mandoa na inona na inona tanteraka ary mankafy Windows 8 maimaimpoana.
Toa Microsoft efa mieritreritra ny hanasitrana an'io ianao fahadisoana faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Ny lesoka ao amin'ny Windows 8 dia mamela ny OS
Ahoana ny fanatsarana ny fampisehoana endritsoratra amin'ny Arch Linux